Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay inaad ku fuusho faras? | Fardaha Noti
Jenny monge | | Fardo, Qalabka
Kahor intaadan ku dhaqmin edbinta fardaha, fuushan waa inuu doorto qalabka lagama maarmaanka u ah inuu dareemo raaxo oo la ilaaliyo khataraha suuragalka ah ee ka dhalan kara.
Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa qalabka lagama maarmaanka u ah markaad fuushan tahay faras.
1 Dharka fuushan
1.2 Jidhka ama jirka difaaca
1.4 Gacmo gashiga
1.5 Saraawiisha Fuulista ama Breeches
1.6 Sharabado ama sharaabaadyo
1.7 Kabaha fardooleyda
2 Qalabka fardaha
2.2 Noodh off
2.4 Ilaaliyeyaasha iyo faashadda
Dharka waa inuu noqdaa raaxo leh oo sahlan in la dhaqaaqo marka lagu daro ilaalinta ciddaad aragtay. Iibsashada dharka fardooleyda oo tayo leh waa maalgashi fardooley kasta maxaa yeelay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku raaxaysato inbadan oo daqiiqado ah oo ku saabsan faraska adoo og in lagaa ilaaliyo.
Dharka aasaasiga ah waa: Koofiyad, Vest ama ilaaliyaha jirka, Jaakada, galoofyada, Saraawiisha fuushan ama Breeches, sharaabaadyo ama sharaabaadyo iyo kabaha Fardooleyda.
Ka sokow ahaanshaha waajib ah iyo ka mid ahaanshaha qalabka aasaasiga ah ee edbinta fardo kasta, waa cunsurka aasaasiga u ah ilaalinta iyo badbaadada wadaha. Badanaa waxay ka samaysan yihiin qalab gaar ah oo ka samaysan cusbo ama caag. Qalabkan dibedda ayaa nuugaya saamaynta marka lagu daro ka-hortagga koofiyadu inay kala-baxdo oo ay u qodaan madaxa fuushan. Gudaha, qalab raaxo leh iyo suuf ayaa loo isticmaalaa.
Waa muhiim in la hubiyo in koofiyadda fardooleyda ee la soo iibsaday ay tahay la ansixiyay si loo hubiyo in tayada ay wanaagsan tahay sidaa darteedna na siiso ammaan.
Iibso - Koofiyad fuushan
Jidhka ama jirka difaaca
Dharkaan, sida koofiyadda, waa muhiim u ah nabadgelyada wadaha inta lagu jiro fuulista. Waa khasab ku ah carruurta aan qaan gaarin had iyo jeer iyo dadka waaweyn ee farsamooyinka fardooleyda qaarkood. Si kastaba ha noqotee isticmaalkeeda ayaa lagula taliyaa wakhti kasta maadaama ay dhuuqeyso nabarrada si looga fogaado dhaawacyada suurtagalka ah ee ka dhici kara fuulitaanka fuulitaanka.
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah dharka ugu caansan ee qalabka fuushanbayaasha. Waa dharka loo doortay bilicsanaanta taas oo bixisa wax ka badan difaac. Badanaa waa midabyo go'an oo caadi ah iyo midabbo qabow.
Iyagu maahan qasab oo sidaas darteed waxay ku xiran tahay fuushanuhu inuu go'aansado inuu adeegsanayo iyo in kale. Si kastaba ha noqotee syihiin dhammaystir wanaagsan si looga fogaado raaxo-darrada ay mindhiciradu ku keeni karto gacmaha, marka lagu daro iska ilaalinta xoqida haddii ay dhacdo dhicitaan.
Haddii aad go'aansato inaad isticmaasho, waxaa ugu wanaagsan in la doorto galoof dhejis ah oo ku habboon qaabka gacmahaaga oo raaxo leh. Waxaa muhiim ah inaysan yareeynin dhaqdhaqaaqa gacmaha fuushanaanshaha inta uu xakameynayo xiidmaha faraskiisa.
Iibso - Gacmo gashiga
Saraawiisha Fuulista ama Breeches
Saraawiil si gaar ah loogu talagalay fuushan fardaha ayaa laga sameeyay dhar laastik ah oo adkaysi u leh in laga ilaaliyo xirashada leh faraska furka joogtada ah.
Saraawiil waa in la doortaa oo ku habboon jirka fuushan laakiin aan yareeynin dhaqdhaqaaqa. Xulashada dharka raaxada leh ee u oggolaanaya dabacsanaanta waa inay adkaadaan nooc kasta oo dhaqdhaqaaq ah.
Iibso - Surwaal fardooley ah
Sharabado ama sharaabaadyo
Sida surwaalka oo kale, dhammaan qalabka lugaha waxay xiriir joogto ah la leeyihiin jirka faraskeenna. Sidaa darteed waa muhiim in la doorto sharaabaadyo dheer oo leh faashad faashad leh si looga fogaado cuncunka.
Tani waa dharka ugu dambeeya ee aasaasiga ah ee qof kasta oo fuushan waa inuu yeesho, waana mid kale oo muhiim ah. Waxaa lagugula talinayaa in kabaha ay yihiin sare oo ku habboon lugta fuushanba si qumman. Sidaa darteed, ku-dhuuqsashada cunsurrada salka ee sababi kara dhibaato ku timaadda dhaqdhaqaaqa ama xitaa dhicitaanka faraska waa laga fogaadaa.
Badanaa waxaa lagu sameeyaa maqaar bixiya raaxo dheeraad ah, si kastaba ha noqotee waxaa sidoo kale jira moodooyin ka samaysan waxyaabo kale sida balaastigga oo loogu talagalay carruurta.
Sidoo kale waa lagugula talinayaa in kabaha ay leeyihiin xoogaa cidhib ah si aad si fiican ugu haboonaato qaabka oo ka ilaali cagtu inay siibato.
Iibso - Boorsooyinka
Taariikhda oo dhan kooxda farasku way isbeddelayeen. Laga bilaabo seddexdii ugu dambaysay ee qarnigii XNUMXaad, markay fardo ka tageen fulinta waxsoosaarka beeraha iyo militariga oo ay u noqdeen ciyaartooy isla markaana loo isticmaalo xilliyada firaaqada, waa marka qalabkoodu qaato weji muhiim ah
Dharka ayaa isugu jira dhaqan (maqaar) iyo casriyeyn. Tusaale ahaan, koorsooyinku waxay anatomical u yihiin fuulitaanka iyo faraska labadaba. Ama sidoo kale waxaan u heli karnaa waxyaabo kale oo cusub iyo qaabab loogu talagalay qalabka wax lagu duubo.
Aan aragno waa maxay waxyaabaha aasaasiga ah ee ka kooban qalabka faraska.
Waxaan ka heli karnaa noocyo badan oo suuqa ka mid ah, oo ku kala duwan habdhaqanka fardooleyda ee la qaadayo: boodboodka, labiska, kubbadda fardaha, duulaanka ... ama isticmaalka guud.
Koorsooyin waa inuu si sax ah ugu fadhiisto gadaasha faraskeena una ogolaadaa xorriyad buuxda dhaqdhaqaaqa. Alwaaxa waa inay ku tiirsadaan dhererkooda oo dhan xagga dambe si kursigu si wanaagsan isugu dheellitiran yahay.
Una Kursiga sida xun loo hagaajiyay wuxuu sababi karaa xanuun faraskayaga sidoo kale, uma oggolaan doono fuulitaanka inuu si wanaagsan u fuulo
Waxaa jira a tiro badan oo madax-bannaanid ah iyadoo kuxiran anshaxa la qabanayo. In kasta oo ay dhammaantood ka soo wada bilaabmayaan qaab-dhismeed isku mid ah: madaxa, maraq, sanka la gashado, sanka la xidho iyo labada dhaban. Madaxa hore waa suunka ka gudba suuxdinta qoorta taasna, oo ay weheliso suufka dhabannada, ayaa afka ku haysa meel. Xadhig isweydaarsigu waa suunka ka gudba wejiga wuxuuna ka celiyaa madaxa inuu gadaal u dhaqaaqo. Xiiraha waa in si fiican loo hagaajiyaa si looga hortago in madaxa madaxu dhaafo dhagaha. Sanka sanka ayaa ka celiya faraska inuu afkiisa aad u kala qaado oo uu daanka ka gudbo.
Nuuxnadu badanaa ka samaysan maqaar iyo in ka badan iyo in ka badan ayaa lagu duubay qaybaha ugu xasaasisan sida kan ku socda naaska neefka. Waxaa intaa dheer, qaar baa madaxa gadaal u durkay gadaal si looga ilaaliyo inuu ku riixo naaska qoortiisa.
Es mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan kooxda. Waa qaybtii waxaa lagu soo bandhigaa afka xayawaanka waxayna u adeegtaa hagitaankiisa. Waxay noqon kartaa steak ama qaniinyo. Fillet-ka ugu caamsan ayaa ah giraanta farta lagu xardhay oo leh dhumuc ka yar ama ka weyn taas oo ku xidhan faraska.
Feelaha foostada ee steak, ayaa ka sii daran. Dhumucdu waxay ugu raaxeysan tahay faraska waana sahlan tahay in la aqbalo dhib la'aan.
Afka faraska Waa in lagu ilaaliyo nadaafad iyo xaalad kaamil ah.
Iibso - Afka
Ilaaliyeyaasha iyo faashadda
Es Way ku habboon tahay in la ilaaliyo lugaha fardaha markii ay tababbaranayaan, socdaan ama ay dabacsan yihiin berrinka. Dhawridda usheeda dhexe, dhudhunka iyo qoobabka, gaar ahaan taajka, ayaa aad muhiim u ah. Si loo fuliyo shaqadan ilaalinta waa ilaaliyeyaal ama faashado ka hortaga shilalka. Waxaa jira shaqo, nasasho, safar, anshax kasta, faashado, dawanno, iwm.
Faashaduhu badanaa waa laastikada, dhogorta, ama isku darka labada qalab. Waxaa muhiim ah inaadan si aad ah u adkayn ama aad uga tagtid si dabacsan oo farasku u waayo.
Faashadda hoose waxaa loo isticmaalaa in lagu nasto ama la shaqeyso howsha dayactirka heerkulka marka lagu daro ilaalinta aaggaas.
Ilaaliyeyaasha safarka waxay gacan ka geystaan ​​ilaalinta xubnaha sinnaanta gudaha gaariga weyn ama trailer.
Dawannadu waxay ka ilaaliyaan cidhibta iyo taajka koofiyadda inay gaaraan addinka dambe ee dhinaca hore.
Iibso - Ilaaliyeyaasha iyo faashadda
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay inaad ku fuusho faras?
Gypsy vanner, "fardaha jimicsiga"